RABATKA EE DALKA: WAXA AY TAHAY, NOOCYADA UGU MUHIIMSAN, XEERARKA NAQSHADEYNTA BEERTA UBAXA - SOOSAARKA DALAGGA
Maxay tahay iyo sida loo habeeyo habka raajka ee dacha
Xagaaga xagaaga oo dhan waxay doonayaan in ay qurxiyaan jilitaankiisa si quruxsan iyo dhadhan. Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo loo sameeyo tan. Sida ikhtiyaarka ah - rabatka, waa arrin xiiso leh ee dhismaha muuqaalka. Sida loo qalabeeyo, akhri.
Rabatka - ubax diineed oo qaab ah cidhiidhi ah (illaa 2-3 m ballaaran) boodboodka waddada beerta, xaydaanka, bowd. Waxay ku dhacdaa hal ama dhowr nooc oo dhirta ah. Badanaa waxa ay leedahay dhinacyo isku mid ah. Sida laga soo xigtay joogitaanka cawska rabatki oo loo qaybiyey hal dhinac iyo labadaba.
Waxaa jira nooc kale oo beerta ubaxa, aad u la mid ah rabatku - miksborder. Laakiin sida ka duwan iyada, waa in uusan noqon mid aad u iftiimaya ama si adag u adag. Labada sano iyo dhirta dilka ah ayaa lagu beeray.
Ma taqaanaa? Midabada qaarkood waxaad ku qeexi kartaa cimilada maalmaha soo socda. Xilliga roobka, honeysuckle iyo acacia huruud ah ayaa ka daalay ur adag oo soo jiidata cayayaanka badan. Buttercups, mallows iyo marigolds ayaa madaxa ku foorarsanaya qorraxda oo eegaya. Ferna wuxuu caleemo saaraa caleemaha si uu u ilaaliyo qoyaanka xilliga qallalan ee xilliga qalalan.
Sida caadiga ah, rabatki wuxuu sameeyaa hal nooc ama dhowr nooc oo dhirta, taas oo abuuraysa xadhig ka mid ah dhererka kala duwan ama rooga leh qaab muuqaal leh oo isku mid ah. Hase yeeshee, isku dhafanaanta qasab ma aha inaad u hoggaansanto arrintan, waxaad abuuri kartaa wax ka kooban dhajintaada. Sidaa daraadeed, ugu yaraan toban nooc oo kala geddisan oo kala geddisan oo isku dhafan.
Rabatki wuxuu ku yimaadaa noocyo kala duwan, oo aan ka wada hadli doono faahfaahin dheeraad ah.
By habka of degtey
Waxaa jira dhowr doorasho:
Xaaladda hal-hal dhinac ah, dhinaca labaad waa dhismaha, xaydaanka, waddada. Haddii lagu rinjiyeeyo midab gaar ah, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo marka la sameynayo sariirta ubaxa. Dhirta iftiinka ah waxay u muuqdaan kuwo qurux badan oo derbi madow iyo kuwa kale. Haddii dhinaca ka soo horjeeda wareegyada qaboobaha (cawl, buluug), ubaxyada waa in lagu dhex daro diirimaad (jaalle, oranji). Waxaa lagula talinayaa in ay meel udhigaan si ay midba midka kale u noqoto in dhulka uusan muuqan oo sidaas darteed ma dhumo sawirka guud;
Waxaan kugula talineynaa inaad aqriso sida loo sameeyo sariir qurux badan oo dhagaxyo iyo taayirrada muraayadda.
labada dhinac ee ku yaal meel ka baxsan dhismayaasha, bartamaha beerta. Waxay ka iman karaan hal ama dhowr heer. Hal tier - isku midka ah ubaxa. Qeybo dhowr ah - bartamaha waxaa ku jira ubax dheer oo afkoda ah, iyo meel u dhow - oo leh kuwa hoose. Waa muhiim in la tixgeliyo muddada ubax ee mid waliba si looga fogaado muuqaalka kore ee qaawan iyo cufan fool xun;
sariirta ubaxyada ah ayaa loo qaybiyaa meelo toosan, iyaga oo dhirta dhaadheer u kala qaybiya - dahlias, farshaxan, shinni;
xayawaanka ubucda ee joogtada ah ee miisaanka badan, intooda badanna loo isticmaalo jardiinooyinka waaweyn ee magaalo.
Sariiraha ubaxa ah ee asymmetric waxaa lagu beeray meel u dhow xayndaabka, dhirta yaryar ee horay ugu sareysa. Iyo meel u dhow sariiraha ubaxyada ee dhinacyada dhinacyada leh.
Cunto-wareerka noocan oo kale ah sida tigridia, babaan, phlox, cabiosa, gaillardia, astilba, feverfew, gelenium, geranium, vatochnik, hibiscus, catnip, kosmeya, rudbeckia, ghazania, aster, marti, sage, gypsophila, anemone, waxaad abuuri kartaa noocyo kala duwan oo asalka ah sariiraha ubaxa
By noocyada dhirta
Qaar ka mid ah sariiraha ubaxa waxay u sameeyaan oo kaliya xilli-ciyaareedka, sidaas darteed waxay isticmaalaan dhirta sanadlaha ah, kuwo kale - dhawr sano oo kaliya oo kaliya wakiilada muddada dheer. Waa suurtagal in la yiraahdo noocyada noocan oo kale ah waa sax. Dhamaan waxay ku xiran tahay aragti shakhsiyeed ee naqshadeeye iyo fahamkiisa geeddi-socodka.
By khadka midabka
Haddii aan ka hadalno midabada sariiraha ubaxa, ka dibna waxaa jira:
is-beddelka - badalashada midabo badan;
monochrome - kiiskan, oo leh ubax siman, aan ka badnayn saddex tone aasaasiga ah ayaa la soo saaraa, laakiin midab kala duwan ayaa loo ogol yahay.
Waa muhiim! Qaadista ubaxyada roogki udhexeeya, waa in aanad qaadin. Sidaa darteed, waxaad u horseedi kartaa kala duwanaansho xoog leh oo kali ah.
Laga dhiso dhererka iyo gadaashka
Waxaa jira sariiraha ubaxa iyo tirada heerarka:
Single-tier - waxaa ku jira ubax isku mid ah oo isku dhafan oo ku jira hal dabool;
xargaha - marka lagu meeleeyo ubaxyada dheer, iyo dhinacyada - faaqidaad;
marka la gooyey - marka dhirta la dhigo hoos u dhac dhinaca hore ee dariiqa. Tani waa geedi socod adag oo dherer leh taas oo ah waxa ugu muhiimsan waa naqshad aad u sax ah.
Sariiraha ubaxyada lafaha ah ee la isku qurxiyo ayaa ku habboon inay u wareegaan si siman.
Abuur samee rigooradaada
Hada, tallaabo tallaabo ah, waxaan ka qaban doonaa sidii aan si shakhsi ah u dhisi lahayn dib-u-celinta.
Qorsheynta iyo abuurista mashruuc
Bilow inaad sameyso qorshe:
ballaaran sariirta ubaxa - aan ka yarayn 1m;
dhererka ugu hooseeya = width saddexda ah;
halkii 1 m² waxaa jiri kara ugu badnaan 9 duqoobid ama ubax yar oo koraya, 4 sare, 5 - dherer dhexdhexaad ah iyo maskax;
Xaqiiqo in la beero beerta duurka ka dib masaafad gaar ah. Sariiraha dheeraadka ah ee ugu fiican waa 6 m.
Soodhadhka noocaas ah sida ikhtiyaarka ugu fiican waa goobaha hoose ee wareegsan ama dabacsan oo aan lahayn isdabamarin.
Calaamadee sariirta ubax leh ulaha iyo xargaha.
Kaga qaado dhul leh diyaar garow ah cawska, ha u qalajin.
Ka saar dhirta dhintay.
Ka saar daaha sare ee dhulka (ilaa 15 cm).
Ka dig meel kale 10 cm.
Isku qasbo carrada laga saaro ciid, peat, bacriminta (saamiga waxay ku xiran tahay nooca carrada).
Ku shub dhamaanba meel ka mid ah sariiraha ubaxa mustaqbalka, heerarka.
Dhulku dhulka ha fadhiisan.
Xulashada iyo beerashada ubaxyada
Ubaxyada ay doortaan iyo sida loo beerayo waa go'aankaga kaliya.
Laakiin weli waxaa jira qaar ka mid ah talooyinka:
sariirood oo muuqaal ah oo muuqaal leh, halkaas oo hooska dhalaalaya ee la isku daro. Laakiin xusuusnow - badanaa kala duwan ee midabada, ayaa fududaa foomamka waa inay ahaadaan. Geedka canhaga ee siyaalo kala duwan ayaa lagula talinayaa in lagu dhejiyo xariijinta, laakiin haddii aad isticmaasho noocyo yar oo hal mar ah, qaababka joomatari ee ugu jilicsan waxay u eegi doonaan sida ugu cajiib badan;
sameynta sariirta ubax xitaa ubax sanadle ah, tixgelin daqiiqadda ubaxooda, sidaa daraadeed mustaqbalka waxaa jiri doona huluun fool xun ama dhakhso ah isla markaana ubax siman. Waa inaysan jirin isku dheelitir la'aanta, marka ubaxyada xayawaanka lagu beddelo mid kale;
ee loogu talagalay xulashada barkadaha iyo kala-duwan, waa lagama maarmaan in si aan fiicnayn loo beeray dhirta sare iyo cawska aan daboolin kuwa yaryar, sababtoo ah waxay ku dari doonaan jilibka guud ahaaneed.
Waa muhiim! Markaad dooratid midabada waxa fiican inaadan isticmaalin aragtiyo dagaal. Yar oo ay u baahan yihiin daryeel joogto ah, laakiin sidoo kale ilo kale ubaxyada koraya.
Marka dhulku diyaar yahay, iyo ubaxyada la doorto, samee calaamadda sariirta ubax ee koox kasta oo ubax ah, waxay qeexaan lambarkooda qayb kasta oo kala duwan iyo ubax dhir ah sida ku cad mashruuca.
Daryeel caafimaad oo raajka ah
Waxaa muhiim ah in biyaha la gooyo wakhtigii loogu talagalay iyo sidoo kale qaadista dhirta. Ha ilaawin quudinta. Iyadoo bilawga xilliga dayrta, beerashada sanadlaha ah waxay u baahan tahay in laga saaro dhulka, iyo dilka dilka ah.
Haddii aad rabto inaad sawirto sawirkaaga, waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad akhriso sida loo sameeyo qulqulka qalalan, ilaha, gabayga, ladybugka, xayndaabka xayawaanka, iyo sidoo kale sida loo qurxin karo jirrid.
Ubax aad goosato inaad baxdo xilliga jiilaalka, waxaad u baahan tahay inaad kormeerto: ka saar dadka cudurka buka iyo kuwa caafimaadka leh - ka bax fasaxyada qaboobaha ama beerista haddii loo baahdo. Si aad u ilaaliso nidaamka xididka ka soo dhaxan daran, waxaa lagula talinayaa inay si fiican u duubaan.
Khaladka ugu muhiimsan ee naqshadeynta rabatki - rabitaan ah in ay ka dhigto mid aad u ballaaran iyo hodan ah midabyo kala duwan. Laakiin halkan waxaad u baahan tahay inaad xasuusato wada-noolaanshaha, maxaa yeelay ubaxa waa inuu marka hore soo jiito muuqaalkiisa. Ka bilow waddooyinka yaryar, dhinaca dhinacyada kuwaas oo aad dhali kartaa cidhiidhi, laakiin sariiro ubax ah.
Khaladka labaad waa meesha qaldan. Sababtoo ah qaabka sariirta ubaxa, qayb ka mid ah wuxuu mar walba ku jiri karaa hooska, tan labaad, ka hor, qorraxda, qayb ka mid ah waxay noqon doontaa qalalan, iyo qaybta ka soo horjeeda waxay noqon doontaa qoyan. Sababtan darted, suuxdinta sariirta ubaxku aad bay u xanuunsan kartaa.
Sidaa darteed, si sax ah u xisaabiso masaafada u dhexaysa dhirta ee hoos u dhigta hooska, iyo kuwa jecel qorraxda. Sidoo kale ka feker sida loo beddelo ubaxyada qoyaan-qoyan iyo kuwa door bidaya ciidda si fiican loo miiray. Waxaad dooran kartaa ubaxyo, waxay si fudud u dhigi karaan xaalado kala duwan iyo xaafad kasta.
Qorshaha diyaarinta rabatok
Mashruucyada rabatok waxay noqon kartaa mid aad u kala duwan, waxay ku xiran tahay maskaxdaada iyo kartidaada. Tusaale ahaan, waxaan ku siinnaa laba qorshe oo diyaar ah. Qorshaha 1aad
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido sida loo sameeyo beerta cawska, dhagaxyada iyo iskudhafka dacha.
Ma taqaanaa? Ubaxyada qaarkood ayaa la cunaa. Tusaale ahaan, lowska waxaa laga sameeyaa saladh (waxa ugu muhiimsan waa in lagu qooyo). Chicory ayaa badali kara kaafiga. Macmacaanka waa la kariyaa laga bilaabo xididka lakala, jelly waxaa laga sameeyaa violets.
Rabatka waa xal aad u xiiso badan oo ubax ah, laakiin waxaa haboon in la xallilo arrintan si masuuliyad leh. Ka dib oo dhan, quruxda beerta ubaxa mustaqbalka waxay ku xiran tahay dabeecaddaada. Haddii aad si sax ah u xisaabiso oo aad u soo degto, sariirtaasi wax dhibaato ah kuma keeni doonto.